Iindaba - Ngaba amandla ahlaziyekayo ayakuchaza ngokutsha itekhnoloji kwikamva elizinzileyo?
Ifowuni: +86 13459204925
ISolar Street Light
ISolar Landscape Light
UkuKhanya koMkhukula weSolar
Ukukhanya kweCCTV yeSolar
0.8-5kw inkqubo yelanga
Inkqubo yeSolar ephathwayo
IBhalbhu yesibane esiLed
Ngaba amandla ahlaziyekayo ayakuchaza ngokutsha itekhnoloji kwikamva elizinzileyo?
Ekuqaleni kwee-1900, iingcali zamandla zaqala ukuphuhlisa igridi yamandla.Bafumene unikezelo lombane oluninzi noluthembekileyo ngokutshisa izibaso zefosili ezifana namalahle neoyile.UThomas Edison wayichasa le mithombo yamandla, esithi uluntu lufumana amandla kwizinto zendalo, ezinjengokukhanya kwelanga nomoya.
Namhlanje, amafutha efosili ngowona mthombo wamandla mkhulu ehlabathini.Njengoko abathengi abaninzi besazi ngempembelelo embi yendalo, abantu baqala ukufumana amandla avuselelekayo.Utshintsho lwehlabathi kumandla acocekileyo luchaphazele ukuqhubela phambili kobuchwephesha beshishini kwaye lwakhuthaza ubonelelo lwamandla amatsha, izixhobo kunye neenkqubo.
I-Photovoltaic kunye nolunye uphuhliso lwelanga
Njengoko imfuno yamandla ahlaziyekayo isanda, iingcali zamandla ziphuhlisa itekhnoloji entsha kwaye zandise unikezelo.Amandla elanga yimveliso enkulu yehlabathi kwicandelo lamandla acocekileyo.Iinjineli zendalo zenze iipaneli ze-photovoltaic (PV) ukuphucula ukusebenza kakuhle kwamandla acocekileyo.
Le teknoloji isebenzisa iiseli ze-photovoltaic ukukhulula ii-electron kwiphaneli, ngaloo ndlela ivelisa amandla ngoku.Umzila wothumelo uqokelela intambo yombane kwaye uyiguqule ibe ngamandla ombane.Izixhobo ze-Photovoltaic zincinci kakhulu, ezinceda abantu ukuba bafake kwiiphahla kunye nezinye iindawo ezifanelekileyo.
Iqela leenjineli zendalo kunye nososayensi bamkele iteknoloji ye-photovoltaic kwaye bayiphucula, benza inguqulelo ehambelana nolwandle.Iingcali zamandla zaseSingapore zisebenzise iiphaneli ezidadayo zephotovoltaic ukuphuhlisa eyona fama inkulu edadayo elanga.Imfuno ephezulu yamandla acocekileyo kunye nendawo yemveliso enyiniweyo iye yachaphazela le nkqubela phambili yobuchwepheshe kwaye iguqule icandelo lamandla ahlaziyekayo.
Olunye uphuculo lwezobuchwepheshe oluchatshazelwa ngamandla ahlaziyekayo zizitishi zokutshaja zelanga kwizithuthi zombane (EV).Ezi zikhululo zamandla ziquka i-photovoltaic canopy enokuvelisa umbane ococekileyo kwisayithi kwaye uyondle ngqo emotweni.Iingcali ziceba ukufakela ezi zixhobo kwiivenkile zegrosari nakwiindawo ezithengisayo ukunyusa ukufikelela kwabaqhubi bezithuthi zombane kumandla ahlaziyekayo.
Inkqubo ehambelanayo nesebenzayo
Icandelo lamandla ahlaziyekayo nalo linefuthe kwinkqubela-phambili yobuchwephesha obukrelekrele.Izixhobo ezihlakaniphile kunye neenkqubo zonga amandla kunye nokunciphisa uxinzelelo kwiigridi zamandla acocekileyo.Xa abantu bebhanqa ezi teknoloji, banokunciphisa ukukhutshwa kwegesi ye-greenhouse kwaye bonge imali.
Isixhobo esitsha esihlakaniphile esithatha indawo yokuhlala yi-thermostat yokuzimela.Abanini bezindlu abaqaphela i-Eco-conscious bafakela itekhnoloji yokuphucula uzinzo kunye nobomi obude beepaneli zelanga eziphezu kophahla kunye nobunye ubuchwepheshe bamandla acocekileyo kwisiza.Ii-thermostats ezihlakaniphile zisebenzisa i-Intanethi yeZinto (IoT) ukwandisa ukufikelela kwi-Wi-Fi kwimisebenzi ephezulu.
Ezi zixhobo zinokufunda uqikelelo lwemozulu yendawo kwaye zilungelelanise ubushushu bangaphakathi ukuze kuncitshiswe ilahleko yamandla ngeentsuku ezitofotofo.Bakwasebenzisa izinzwa zokubona intshukumo ukwahlula isakhiwo kwiindawo ezininzi.Xa indawo ingenamntu, inkqubo iya kuvala umbane wokugcina amandla.
Itekhnoloji ye-smart esekwe kwifu ikwaxhasa ukuphuculwa kokusebenza kwamandla.Abahlali kunye nabanini bamashishini banokusebenzisa inkqubo yokuphucula ukhuseleko lwedatha kunye nokuphucula ukugcinwa kolwazi.Itekhnoloji yamafu ikwaphucula ukufikeleleka kokhuseleko lwedatha, ukunceda abantu bonge imali kunye namandla.
Ukugcinwa kwamandla ahlaziyekayo
Ukugcinwa kweeseli zamafutha e-Hydrogen yenye inkqubela phambili yobuchwepheshe echatshazelwa licandelo lamandla ahlaziyekayo.Esinye sezithintelo zeenkqubo zamandla acocekileyo ezifana neepaneli zelanga kunye nee-injini zomoya kukuba zinomthamo ophantsi wokugcina.Zombini ezi zixhobo zinokubonelela ngamandla ahlaziyekayo ngokusebenzayo ngeentsuku ezinelanga kunye nomoya, kodwa kunzima ukuhlangabezana neemfuno zamandla zabathengi xa iipatheni zemozulu zitshintsha.
Itekhnoloji yeeseli zamafutha e-Hydrogen iphucule indlela yogcino lwamandla ahlaziyekayo kwaye idale ubonelelo lwamandla olwaneleyo.Le teknoloji idibanisa iiphaneli zelanga kunye nee-injini zomoya kwizixhobo ezinkulu zebhetri.Nje ukuba inkqubo ehlaziyiweyo ihlawule ibhetri, umbane udlula kwi-electrolyzer, ukwahlula imveliso ibe yihydrogen kunye neoksijini.
Inkqubo yokugcina iqulethe i-hydrogen, idala ubuncwane obunobutyebi obunamandla.Xa imfuno yombane isanda, i-hydrogen idlula kwisiguquli ukuze ibonelele ngombane osebenzisekayo kumakhaya, iimoto zombane kunye nezinye izixhobo zombane.
Itekhnoloji ezinzileyo kwi-horizon
Njengoko intsimi yamandla ahlaziyekayo iqhubeka isanda, ixhasa ngakumbi kwaye iyahambelana
itekhnoloji iya kungena kwimarike.Iqela leenjineli liphuhlisa imoto yombane eziqhubayo kunye nophahla lwe-photovoltaic-lined.Imoto ibaleka kumandla elanga ewavelisayo.
Abanye abaphuhlisi benza ii-microgrids ezicocekileyo ezisebenzisa amandla ahlaziyekayo kuphela.Amazwe kunye nemimandla emincinci ingasebenzisa le teknoloji ukufezekisa iinjongo zokunciphisa ukukhutshwa kunye nokuphucula ukukhuselwa kwe-atmospheric.Amazwe asebenzisa itekhnoloji yamandla acocekileyo anokunciphisa i-carbon footprint kwaye andise ukufikeleleka kombane.
Ixesha lokuposa: Dec-23-2021
Iimveliso ezishushu Imephu yesiza AMP Mobile
Ngaba amandla ahlaziyekayo achaza itekhnoloji kwakhona...
Ungaqhubeka njani nokurhoxa kancinci kwe...
Izinga lokukhula kwe-US solar indust...
Yazisa eyona ndibaniselwano yamalahle...
Ingxelo ye-IEA: I-PV yehlabathi yongeza i-156GW ngo-2021!...
Idilesi: No.201, #31, Youshanmeidi Villa, Hexuli, Huli District, Xiamen, China
Umnxeba: +86 13459204925 (John Liu)
Ifowuni: +86 13123388978(Eleanor Lin)
I-Solar Street Light Pole, Isibane seSolar Powered, Izibane zeSolar ezingangenwa ngamanzi, Izibane zeSolar zePhulo lokuqubha, Ibhalbhu yokuKhanya ngeSolar, Izibane zeSolar Led zezandyondyo,
Qhagamshelana: UMnu.John Liu